Home Wararka Booliska Gobolka Mudug oo gacanta ku dhigay Rag maandooriye Iibinaayay!!
Booliska Gobolka Mudug oo gacanta ku dhigay Rag maandooriye Iibinaayay!!
Ciidanka Booliiska Gobalka Mudug ee dowlad-goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa gacanta kusoo dhigay 2-ruux oo qeyb ka ah shabakad ka shaqeysa sameeynta iyo ka ganacsiga waxyaabaha maanka dooriya. taasi oo ay sheegeen saraakiisha ciidanka in isticmaalka maandooriyeyaashu ay sabab u noqdaan amaan darada mararka qaar ka dhaca magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobalka Mudug.
Taliye ku xigeenka qeybta Booliiska gobalka Mudug G/dhaxe Maxamuud Cilmi Gulaafe oo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay iney qeyb weyn ka ahaayeen falalka amni dari ee magaalada, maadaama ay ka ganacsanayeen waxyaabaha maanka dooriya.
Gaashaanle sare Cabdi Jaamac Cabdule Xabeeb oo isna la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Ciidanka Booliisku talaabo adag ka qaadi doonaan cid kasta oo lagu soo qabto istimaalka sameynta iyo ka ganacsiga waxyaabaha maanka dooriya, maadaama maandooriyaha loo arko in uu qeyb ka yahay waxyaabaha fududeeya fulinta falalka ammaaan darada ah.
Sikastaba ha ahaatee waxaa dhawaanahaanba sookordheysay dadka ka aganacsada waxyaabaha maanka dooriya.
Previous articleCabdiwali Muudeey oo afka furtay: Dalka sidaan laguma fiirsan karo!
Next articleMaamulka Gobolka Hiiraan oo Beeniyay Khilaaf in uu Jiro Maal-mahaan la Baahinayay!!
Dowlada oo ku fashilantay wadahadaladii Ahlusunna&Ahlusunna oo magacawday Guddiga farsamada Doorashooyinka...
Xildhibaanada BFS oo dacwo ka gudbiyay Gudoomiye Mahad Cabdalla Cawad iyo...